Maxaad kala socota Heshiiska Itoobiya iyo Faransiiska ee Ciidamada Badda ? – Idil News
Maxaad kala socota Heshiiska Itoobiya iyo Faransiiska ee Ciidamada Badda ?
ADDIS ABABA (IDIL NEWS)-Dawladda Faransiiska iyo Itoobiya ayaa wada gaadhay heshiis dhanka Militariga ah gaar ahaana taageeridda ciidamada Badda ee Itoobiya samaysanayso, kadib bookhasho laba maalmood ah oo Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ku joogay dalka Itoobiya.
Idaacadda Dunida la hadasha ee Faransiiska(RFI) ayaa faallo ka qortay taageerada Faransiiska ee dhismaha ciidamada Itoobiya, waxaanay sheegtay in ay Dr Abiy Axmed ka go’an tahay dhismaha ciidankan, islamarkaana guddi khubaro ah u saaray dhisamaha ciidanka Badda bishii January laakiin, ay lama huraan tahay in ciidankaasi ka hawlgalo dalalka deriska ah.
Warbaahinta Faransiisku waxay sheegtay in dalka Eritrea labada dekedood ee ay degi lahaayeen ciidanka Itoobiya ee Casab iyo Masawa mid tahay fadhiisinka ciidanka badda ee Ereteriya tan kalena ay tahay saldhigga Imaaraadku kala dagaallamo Xuutiyiinta Yemen.
Waxa ay intaasi raacisay in dalalka la filayo in Saldhigga Militari ee Itoobiya noqon doona Wadamo ay kamid yihiin Jabuuti, Somaliland iyo Soomaaliya kuwaas oo hadal hayntooda ku aaddan in ay Saldhig siiyaan Itoobiya xooggan tahay.
Dawladda Itoobiya ayaa ciidamadeeda Badda kala dirtay sanadkii 1996 kadib markii dawladda Eritrea xorriyadda qaadatay 1991, islamarkaana Itoobiya noqotay bilaa bad.